Masar: Afti loo Qaadayo Isbaddel lagu Sameeyo Dastuurka
Dalka Masar waxaa maanta afti loo qaadayaa in isbaddel lagu sameeyo dastuurka, taasi oo madaxweynaha dalkaasi Abdel-Fattah al-Sisi u ogolaanaysa inuu xilka sii hayo ilaa iyo sanadka 2030-ka, iyadoo sidoo kale isbadalkani uu xooji doono doorka milatariga Masar.
Amaanka ayaa aad loo xoojiyey jidadka iyadoo la dhigay ciidamo iyo waliba gaadiidka gaashaaman.
Qaar ka mid ah dadkii codaynayay ayaa sheegay in Sisi uu dalka ku leeyahay saamayn dhanka wanaagsan ah isagoo keenay xasilooni xili xaalku aanu wanaagsanayn.
Sidoo kale inta Sisi uu xukunka hayo ayaa dalkaasi Masar cadaadis la saaray mucaaridka iyadoo kooxaha xuquuqda aadmuhuna ay sheegeen in markii u horaysay taariikhda Saxaafada iyo wabaahinta bulshada si xoogan loo xakameeyo.
Kuwa kasoo horjeeda ayaa sheegay in isbadalkan lagu deg degay iyada oo aan si fiican bulshada looga talogalin, hase yeeshee masuuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee Masaarida la siiyey fursad ay kaga doodaan isbadalka islamarkaana dhamaan aragtiyihii la bixiyey lagu daray qorshihii u danbeeyey.
Taageerayaasha Sisi ayaa sheegay in isbadalku muhiim u yahay si waqti badan loo siiyo si uu u dhamaystiro mashaariic horumarinta iyo isbaddelka dhinaca dhaqaalaha.